55 masendimita 80 masendimita
Dhirivhari ~ 3h. Maminitsi makumi matatu., mahara muMoscow
Upamhi 80 cm
Kureba 55 cm
Mumwe-musoro akamuka - 301 bv.
3505 ₽ Композиция с розами
Tswanda yehumambo burgundy maroses mune chimiro chemoyo chipo chakakura kune avo vaunoda uye vaunokoshesa zvakanyanya. maruva akasarudzika, akafukidzwa mugore rekunhuhwirira, anogara mumweya nekurangarira nekusingaperi.
42100 ₽ "Mwoyo kubva kumaruva"
9280 ₽ Bhokisi rine maruva
10876 ₽ Maruva epingi maruva
Zvinoumba: kurongedza (firimu netepi), Lisianthus 20pc., Iris 30pc., Alstroemeria 10pc., Fern 20pc., Ruscus 50pc., Wicker tswanda, Piaflor (oasis) 4pc.
26359 ₽ Tswanda nemaruva nhamba 3
6369 ₽ Mangwanani akanaka